Izindaba - Umugqa we-R&D wochungechunge lwemikhiqizo ye-Rainpoo
Izindaba Zebhizinisi I-Rainpoo tech
I-R&D yochungechunge lomkhiqizo we-Rainpoo
Ngesethulo sokuthi Ubude befocal buyithinta kanjani imiphumela yemodeli ye-3D, ungaba nokuqonda kokuqala kokuxhumana phakathi kobude obugxilile kanye ne-FOV. Kusukela ekumisweni kwamapharamitha endiza kuya kunqubo yokumodela ye-3D, la mapharamitha amabili ahlala enendawo yawo. Ngakho-ke lezi zinhlaka ezimbili zinamuphi umphumela emiphumeleni yokumodela ye-3D? Kulesi sihloko, sizokwethula ukuthi i-Rainpoo iluthole kanjani uxhumo enqubweni yomkhiqizo we-R&D, kanye nendlela yokuthola ibhalansi phakathi kokungqubuzana phakathi kobude bendiza nomphumela wemodeli ye-3D.
1, Ukusuka ku-D2 ukuya ku-D3
I-RIY-D2 iwumkhiqizo owenzelwe ngokukhethekile amaphrojekthi wokuhlola we-cadastral. Futhi iyikhamera yokuqala etshekile eyamukela idizayini yokudonsela phansi kanye nelensi yangaphakathi. I-D2 inokunemba okuphezulu kwemodeli kanye nekhwalithi enhle yokumodela, elungele ukumodela isigcawu esinezindawo eziyisicaba hhayi izitezi eziphakeme kakhulu. Kodwa-ke, ngethonsi enkulu, indawo eyinkimbinkimbi kanye ne-topography (kuhlanganise nemigqa yamandla kagesi aphezulu, oshimula, iziteshi eziyisisekelo nezinye izakhiwo eziphakeme), ukuphepha kwendiza ye-drone kuyoba inkinga enkulu.
Emisebenzini yangempela, amanye amakhasimende awazange ahlele ukuphakama okuhle kwendiza, okubangele ukuthi i-drone ilengise imigqa yamandla kagesi aphezulu noma ishaye esiteshini esiyisisekelo; Noma nakuba amanye ama-drones ayenenhlanhla yokudlula ezindaweni eziyingozi, athola kuphela ukuthi ama-drones ayeseduze kakhulu nezindawo eziyingozi lapho ehlola izithombe zasemoyeni. Lezi zingozi nezingozi ezifihliwe ngokuvamile zibangela ukulahlekelwa kwempahla enkulu kumakhasimende.
Isiteshi esiyisisekelo sibonisa esithombeni, ungasibona siseduze kakhulu ne-drone, okungenzeka ukuthi ingashaya kuyo Ngakho-ke, amakhasimende amaningi asinike iziphakamiso: Ingabe ikhamera ende etshekile enobude obugxilile ingaklanywa ukwenza ukuphakama kwendiza ye-drone ibe phezulu futhi yenze indiza iphephe kakhudlwana? Ngokusekelwe ezidingweni zekhasimende, ngokusekelwe ku-D2, senze inguqulo ende yobude bokugxila ebizwa ngokuthi i-RIY-D3. Uma kuqhathaniswa ne-D2, ekuxazululeni okufanayo, i-D3 ingakhuphula ukuphakama kwendiza ye-drone cishe ngama-60%.
Phakathi ne-R&D ye-D3, besihlala sikholelwa ukuthi ubude bokugxila okude bungaba nobude bendiza obuphakeme, ikhwalithi engcono yokumodela kanye nokunemba okuphezulu. Kodwa ngemva kokusebenza kwangempela, sithole ukuthi bekungekho njengoba bekulindelekile, uma kuqhathaniswa ne-D2, imodeli ye-3D eyakhiwe i-D3 yayinobunzima obuthile, futhi ukusebenza kahle komsebenzi kwakuphansi.
Uhlobo lwenzwa I-APS-C
CMOS usayizi 23.5mm×15.6mm
Usayizi womzimba wephikseli 3.9 um
Isamba samaphikseli 120MP
Isikhathi esincane sokuchayeka 1s
Imodi yokuvezwa kwekhamera Isochronic/Isometric Exposure
ubude bokugxila 20mm/35mm ku-D235mm/50mm ku-D3
Ukunikezwa kwamandla kagesi Ukunikezwa okufanayo (Amandla nge-drone)
umthamo wenkumbulo 320G
Ukulanda idatha kushintshiwe ≥70M/s
Izinga lokushisa lomsebenzi -10°C~+40°C
Izibuyekezo ze-Firmware Mahhala
Isilinganiso se-IP IP 43
2, Ukuxhumana phakathi kobude obugxilile nekhwalithi yokumodela
Ukuxhumana phakathi kobude obugxilile kanye nekhwalithi yokumodela akulula kumakhasimende amaningi ukuthi akuqonde, futhi ngisho nabakhiqizi abaningi bekhamera etshekile bakholelwa ngephutha ukuthi ilensi yobude bokugxila ende iwusizo ekufanekiseni ikhwalithi.
Isimo sangempela lapha siwukuthi: ngesisekelo sokuthi amanye amapharamitha ayafana, ku-facade yesakhiwo, ubude bendawo bude, kubi kakhulu ukulingana kokumodela. Hlobo luni lobudlelwano obunengqondo obuhilelekile lapha?
Ku-artical yokugcina Ubude befocal buthinta kanjani imiphumela yemodeli ye-3D sikushilo ukuthi:
Ngaphansi kwesisekelo sokuthi amanye amapharamitha ayafana, ubude bokugxila buzothinta kuphela ubude bendiza. Njengoba kukhonjisiwe emfanekisweni ongenhla, kunamalensi amabili ahlukene agxilile, abomvu abonisa ilensi yokugxila ende, futhi eluhlaza okwesibhakabhaka ikhombisa ilensi yokugxila emfushane. I-engeli ephezulu eyakhiwe ilensi ende yokugxila kanye nodonga ngu-α, futhi i-engeli ephezulu eyakhiwe ilensi egxile emfushane kanye nodonga ngu-β. Ngokusobala:
Isho ukuthini le “engeli”? Uma i-engeli enkulu phakathi konqenqema lwe-FOV yelensi nodonga, ilensi ivundlile kakhulu uma ihlobene nodonga. Lapho kuqoqwa ulwazi kuma-facade wokwakha, amalensi okugxila amafushane angaqoqa ulwazi lodonga ngokuvundlile, futhi amamodeli e-3D asekelwe kuwo angabonisa kangcono ukuthungwa kwe-facade. Ngakho-ke, ezigcawini ezinama-facade, lapho ubude bokugxila belensi bufushane, yilapho ulwazi oluqoqiwe lwe-facade lunothile futhi kuba ngcono nekhwalithi yokumodela.
Emabhilidini anama-eves, ngaphansi kwesimo sokulungiswa komhlaba okufanayo, ubude be-lens bubude, ukuphakama kwendiza ye-drone ephakeme, izindawo ezingaboni kakhulu ngaphansi kwe-eves, khona-ke ikhwalithi yokumodela izoba yimbi kakhulu. Ngakho-ke kulesi simo, i-D3 enelensi ende yobude bokugxila ayikwazi ukuncintisana ne-D2 ngelensi yobude bokugxila emfushane.
3, Ukungqubuzana phakathi kobude bendiza ye-drone kanye nekhwalithi yemodeli ye-3D
Ngokuvumelana nokuxhumanisa okunengqondo kobude bokugxila kanye nekhwalithi yemodeli, uma ubude bokugxila belensi bufushane ngokwanele futhi i-engeli ye-FOV inkulu ngokwanele, ayikho ikhamera enamalensi amaningi edingekayo nhlobo. Ilensi ye-engeli ebanzi kakhulu (ilensi yeso lezinhlanzi) ingaqoqa ulwazi lwazo zonke izinkomba. Njengoba kuboniswe ngezansi:
Akulungile yini ukuklama ubude bokugxila belensi bufushane ngangokunokwenzeka?
Ingasaphathwa inkinga yokuhlanekezela okukhulu okubangelwa ubude bokugxila obufushane kakhulu. Uma ubude bokugxila belensi ye-ortho yekhamera etshekile buklanyelwe ukuthi bube ngu-10mm futhi idatha iqoqwa ngokulungiswa okungu-2cm, ukuphakama kwendiza ye-drone kungamamitha angu-51 kuphela.
Ngokusobala, uma i-drone ifakwe ikhamera ye-oblique eklanywe ngale ndlela ukwenza imisebenzi, nakanjani kuyoba yingozi.
PS: Nakuba i-ultra-wide-angle lens inomkhawulo wokusebenzisa izigcawu ekufanekisweni kwezithombe ezitshekile, inokubaluleka okungokoqobo kokumodela kwe-Lidar. Ngaphambilini, inkampani edumile yakwa-Lidar yayixhumane nathi, ngethemba lokuthi sizoklama ikhamera yasemoyeni yelensi ene-angle ebanzi, efakwe ne-Lidar, ukuze kuchazwe into ephansi kanye nokuqoqwa kokuthungwa.
4, Ukusuka ku-D3 kuye ku-DG3
I-R&D ye-D3 isenze sabona ukuthi ekuthwebuleni izithombe ezitshekile, ubude bokugxila abukwazi ukuba bude noma bube bufishane ngokunye. Ubude buhlobene eduze nekhwalithi yemodeli, ukusebenza kahle kokusebenza, nokuphakama kwendiza. Ngakho-ke ku-lens ye-R&D, umbuzo wokuqala okufanele ucatshangelwe uthi: ukusetha kanjani ubude obugxilile bamalensi?
Nakuba i-focal emfushane inekhwalithi enhle yokumodela, kodwa ukuphakama kwendiza kuphansi, akuphephile ekundizeni kwe-drone. Ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwama-drones, ubude bokugxila kufanele buklanywe isikhathi eside, kodwa ubude bokugxila obude buzothinta ukusebenza kahle kokusebenza kanye nekhwalithi yokumodela. Kukhona ukungqubuzana okuthile phakathi kobude bendiza kanye nekhwalithi yokumodela ye-3D. Kufanele sifune ukuvumelana phakathi kwalokhu kuphikisana.
Ngakho-ke ngemva kwe-D3, ngokusekelwe ekucabangeni kwethu okuphelele kwalezi zici eziphikisanayo, sase sithuthukise ikhamera ye-DG3 oblique. I-DG3 icabangela kokubili ikhwalithi yokumodela ye-3D ye-D2 kanye nobude bendiza ye-D3, kuyilapho ingeza nesistimu yokukhipha ukushisa neyokususa uthuli, ukuze ikwazi futhi ukusetshenziswa kuma-fixed-wing noma ama-VTOL drones. I-DG3 iyikhamera etshekile ethandwa kakhulu ye-Rainpoo, futhi iyikhamera etshekile esetshenziswa kakhulu emakethe.
Usayizi we-CCD 23.5mm×15.6mm
Isikhathi esincane sokuchayeka 0.8s
ubude bokugxila 28mm/40mm
umthamo wenkumbulo 320/640G
Ukulanda idatha kushintshiwe ≥80M/s
5, Ukusuka ku-DG3 kuye ku-DG3Pros
Ikhamera etshekile ye-RIY-Pros ingafinyelela ikhwalithi engcono yokumodela. Ngakho-ke yimuphi umklamo okhethekile ama-Pros anawo ekuhlelweni kwelensi kanye nesilungiselelo sobude bokugxila? Kulolu shicilelo, sizoqhubeka nokwethula i-design-logic ngemuva kwamapharamitha we-Pros.
6, I-oblique lens angle kanye nekhwalithi yokumodela
Okuqukethwe kwangaphambilini kukhulume umbono onjalo: uma ubude bendawo bufushane, i-engeli yokubuka ibe nkulu, ulwazi oluningi lwe-facade lwesakhiwo lungaqoqwa, futhi ngcono ikhwalithi yokumodela.
Ngaphezu kokusetha ubude bokugxila obunengqondo, vele, singasebenzisa enye indlela yokuthuthukisa umphumela wokumodela: ukwandisa ngokuqondile i-engeli yamalensi e-oblique, angaphinde aqoqe ulwazi oluningi lwe-facade.
Kodwa empeleni, nakuba ukusetha i-engeli enkulu ye-oblique kungathuthukisa ikhwalithi yokumodela, kunemiphumela emibi emibili:
1: Ukusebenza kahle kuzoncishiswa. Ngokukhula kwe-oblique angle , ukunwetshwa kwangaphandle komzila wendiza nakho kuzokwandisa kakhulu. Lapho i-oblique angle yedlula i-45 °, ukusebenza kahle kwendiza kuzokwehla kakhulu.
Ngokwesibonelo, ikhamera professional yasemoyeni Leica RCD30, kungcono oblique angle kuyinto 30 ° kuphela, esinye sezizathu zalesi design ukwandisa ukusebenza kahle.
2:Uma i-oblique angle inkulu kakhulu, ukukhanya kwelanga kuzongena kalula kukhamera, kubangele ukukhanya (ikakhulukazi ekuseni nantambama ngosuku olumnyama). Ikhamera ye-Rainpoo etshekile ingeyokuqala ukwamukela idizayini yelensi yangaphakathi . Lo mklamo ulingana nokwengeza i-hood kumalensi ukuze uvimbele ukuthi ungathinteki ukukhanya kwelanga okutshekile.
Ikakhulukazi kuma-drones amancane, ngokuvamile, isimo sabo sengqondo sokundiza sibi kakhulu. Ngemva kokuba i-lens oblique angle kanye nesimo sengqondo se-drone sesibekwe phezulu, ukukhanya okunhlanhlathayo kungangena kalula ekhamera, kuqhubeke kwandise inkinga yokuxhopha.
7. Ukugqagqana komzila kanye nekhwalithi yokumodela
Ngokusho kokuhlangenwe nakho, ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yemodeli, kunoma iyiphi into esesikhaleni, kungcono ukumboza ulwazi lokuthungwa kwamaqembu amahlanu amalensi ngesikhathi sendiza.
Lokhu kulula ukukuqonda. Isibonelo, uma sifuna ukwakha imodeli ye-3D yesakhiwo sasendulo, ikhwalithi yokufanisa yendiza yendilinga kufanele ibe ngcono kakhulu kunekhwalithi yokuthatha izithombe ezimbalwa kuphela ezinhlangothini ezine.
Uma izithombe ezimbozwe kakhulu, kulapho imininingwane equkethe khona indawo kanye nokuthungwa kwayo, futhi iba ngcono nekhwalithi yokumodela. Lena incazelo yokugqagqana komzila wendiza wokuthwebula izithombe ezitshekile.
Izinga lokugqagqana lingenye yezinto ezibalulekile ezinquma ikhwalithi yemodeli ye-3D. Esigcawini esijwayelekile sokuthwebula izithombe ezitshekile, izinga lokugqagqana ngokuvamile liyisihloko esingu-80% kanye no-70% emaceleni (idatha yangempela ayidingeki).
Eqinisweni, kuhle kakhulu ukuba nezinga elifanayo lokugqagqana emaceleni, kodwa ukugqagqana okuphezulu kakhulu kwezinhlangothi kuzonciphisa kakhulu ukusebenza kahle kwendiza (ikakhulukazi kuma-drones anamaphiko angaguquki), ngakho-ke ngokusekelwe ekusebenzeni kahle, ukugqagqana okujwayelekile kwezinhlangothi kuzoba ngaphansi ukugqagqana kwesihloko.
Amathiphu: Uma kucatshangelwa ukusebenza kahle kokusebenza, idigri egqagqene ayikho phezulu ngangokunokwenzeka. Ngemva kokudlula "okujwayelekile" okuthile, ukuthuthukisa idigri egqagqene kunomphumela olinganiselwe kumodeli ye-3D. Ngokwempendulo yethu yokuhlola, ngezinye izikhathi ukwandisa ukugqagqana kuzokwehlisa ikhwalithi yemodeli. Isibonelo, esigcawini sokumodela sokucaca esingu-3 ~ 5cm, ikhwalithi yokumodela yedigri egqagqene ephansi kwesinye isikhathi ingcono kunedigri egqagqene ephezulu.
8, Umehluko phakathi kokugqagqana kwetiyori kanye nokugqagqana kwangempela
Ngaphambi kokundiza, simisa isihloko esingu-80% kanye nokugqagqana kwezinhlangothi okungama-70%, okuwukugqagqana nje komcabango. Endizeni, i-drone izothinteka ukugeleza komoya,futhi ukushintsha kwesimo sengqondo kuzobangela ukugqagqana kwangempela kube kuncane kunokugqagqana kwethiyori.
Ngokuvamile, kungakhathaliseki ukuthi i-multi-rotor noma i-drone enamaphiko agxilile, isimo sengqondo sendiza sibi, ikhwalithi yemodeli ye-3D iba yimbi kakhulu. Ngenxa yokuthi ama-multi-rotor noma ama-fixed-wing drones amancane anesisindo esilula futhi mancane ngosayizi, asengozini yokuphazamiseka kokugeleza komoya kwangaphandle. Isimo sabo sengqondo sokundiza ngokuvamile asisihle njengesama-rotor amaningi aphakathi nendawo / amakhulu noma ama-drones anamaphiko angaguquki, okuholela ekutheni idigri eleqayo langempela endaweni ethile yaphansi alanele, okuthinta ekugcineni ikhwalithi yokumodela.
9 、 Ubunzima ekumodeleni kwe-3D kwezakhiwo eziphakeme kakhulu
Njengoba ukuphakama kwesakhiwo kukhula, ubunzima bemodeli ye-3D buzokhula. Okunye ukuthi isakhiwo esisezingeni eliphezulu sizokwandisa ubungozi bokundiza kwe-drone, kanti okwesibili ukuthi njengoba ukuphakama kwesakhiwo kukhula, ukugqagqana kwezingxenye eziphakeme kwehla kakhulu, okuholela eqophelweni elibi lemodeli ye-3D.
1 Umthelela Wokwengeza Ukunqwabelana 3D Ukumodela Ikhwalithi Yesakhiwo Esiphakeme
Kule nkinga engenhla, amakhasimende amaningi anolwazi athole isisombululo: khulisa izinga lokugqagqana. Ngempela, ngokwanda kwezinga lokugqagqana, umphumela wemodeli uzothuthukiswa kakhulu. Okulandelayo ukuqhathanisa izivivinyo esizenzile:
Ngalesi siqhathaniso esingenhla, sizothola ukuthi: ukwanda kwezinga lokunqwabelana kunethonya elincane kukhwalithi yokumodeliswa kwezakhiwo ezisezingeni eliphansi; kodwa inethonya elikhulu kwikhwalithi yokumodela yezakhiwo eziphakeme.
Kodwa-ke, njengoba izinga lokugqagqana likhula, inani lezithombe zasemoyeni lizokhula , futhi isikhathi sokucutshungulwa kwedatha sizokhuphuka.
2 Umthelela we ubude bokugxila ku 3D Ukumodela Ikhwalithi Yesakhiwo Esiphakeme
Senze isiphetho esinjalo kokuqukethwe kwangaphambilini:Ngoba isakhiwo se-facade 3D izigcawu zokumodela, uma ubude bokugxila buyisikhathi eside, kuba kubi kakhulu ukumodela izinga. Kodwa-ke, ngokumodela kwe-3D kwezindawo eziphakeme kakhulu, ubude bokugxila obude buyadingeka ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yokumodela. Njengoba kuboniswe ngezansi:
Ngaphansi kwezimo zokulungiswa okufanayo kanye neziqu ezigqagqene, ilensi yobude bokugxila ende ingaqinisekisa izinga langempela eligqagqene lophahla kanye nobude bendiza obuphephe ngokwanele ukuze kuzuzwe ikhwalithi engcono yokumodeliswa kwezakhiwo eziphakeme.
Isibonelo, lapho ikhamera ye-DG4pros oblique isetshenziselwa ukwenza imodeli ye-3D yezakhiwo eziphakeme, ayikwazi nje ukufeza ikhwalithi enhle yokumodela, kodwa ukunemba kusengafinyelela ku-1: 500 izidingo zenhlolovo ye-cadastral, okuyinzuzo yokugxila okude. amalensi ubude.
Icala: Icala eliyimpumelelo lezithombe ze-oblique
10, amakhamera we-RIY-Pros oblique
Ukuze kuzuzwe ikhwalithi engcono yokumodela, ngaphansi kwesisekelo sesinqumo esifanayo, kuyadingeka ukuqinisekisa ukugqagqana okwanele kanye nezinkambu ezinkulu zokubuka.Ezifundeni ezinomehluko omkhulu wokuphakama kwezwe noma izakhiwo eziphakeme, ubude bokugxila belensi nakho isici esibalulekile esithinta ikhwalithi yokumodela. Ngokusekelwe ezimisweni ezingenhla, amakhamera e-Rainpoo RIY-Pros ochungechunge lwe-oblique enze lokhu kulungiselelwa okuthathu okulandelayo kumalensi:
1 Shintsha ukuma kwelensises
Kumakhamera e-oblique ochungechunge lwe-Pros, umuzwa onembile kakhulu ukuthi ukwakheka kwawo kuyashintsha ukusuka kokuyindilinga kuye kwesikwele. Isizathu esiqondile salolu shintsho ukuthi ukwakheka kwamalensi kushintshile.
Inzuzo yalesi sakhiwo ukuthi usayizi wekhamera ungaklanywa ukuba ube mncane futhi isisindo singaba lula kakhulu. Kodwa-ke, lesi sakhiwo sizoholela ekutheni izinga eligqagqene lamalensi atshekele kwesokunxele nakwesokudla libe phansi kunalelo lemibono yangaphambili, emaphakathi, nangemuva: okungukuthi, indawo yesithunzi A incane kunendawo yesithunzi B.
Njengoba sishilo ngaphambili, ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle kwendiza, ukugqagqana kwezinhlangothi ngokuvamile kuncane kunokugqagqana kwesihloko, futhi lokhu “kuhlelwa okuzungezile” kuzonciphisa ukugqagqana kwezinhlangothi, yingakho imodeli ye-3D esemaceleni izoba mpofu kunesihloko esithi 3D. imodeli.
Ngakho-ke ochungechungeni lwe-RIY-Pros, i-Rainpoo iguqule isakhiwo samalensi ukuze sithi: isakhiwo esihambisanayo. Njengoba kuboniswe ngezansi:
Lokhu kuhlelwa kuzodela ingxenye yomumo nesisindo, kodwa inzuzo ukuthi kungaqinisekisa ukugqagqana okwanele emaceleni futhi kuzuze ikhwalithi engcono yokumodela. Ekuhlelweni kwendiza kwangempela, i-RIY-Pros inganciphisa nokugqagqana okuthile emaceleni ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle kwendiza.
2 Lungisa i-engeli ye oblique lenses
Inzuzo "yesakhiwo esihambisanayo" ukuthi ayiqinisekisi kuphela ukugqagqana okwanele, kodwa futhi yandisa i-FOV eseceleni futhi ingaqoqa ulwazi olwengeziwe lokuthungwa kwezakhiwo.
Ngalesi sisekelo, siphinde sandisa ubude obugxilile bamalensi e-oblique ukuze unqenqema lwawo olungezansi luhambisane nonqenqema olungezansi lwesakhiwo sangaphambilini “sesakhiwo esizungezile,” sikhulise ngokwengeziwe umbono oseceleni we-engeli, njengoba kukhonjisiwe esithombeni esilandelayo:
Inzuzo yalesi sakhiwo ukuthi nakuba i-angle ye-oblique lens ishintshiwe, akuthinti ukusebenza kahle kwendiza. Futhi ngemuva kokuthi i-FOV yamalensi aseceleni isithuthukiswe kakhulu, idatha yolwazi olungaphambili lwe-facade ingaqoqwa, futhi ikhwalithi yokumodela iyathuthukiswa.
Ukuhlola kokuqhathanisa futhi kubonisa ukuthi, uma kuqhathaniswa nesakhiwo esivamile samalensi, ukuhlelwa kochungechunge lwe-Pros kungathuthukisa ngempela ikhwalithi esemaceleni yamamodeli e-3D.
Kwesobunxele imodeli ye-3D eyakhiwe ikhamera yesakhiwo esivamile, futhi kwesokudla imodeli ye-3D eyakhiwe ikhamera ye-Pros.
3 Khulisa ubude bokugxila be- ama-lens oblique
Amalensi amakhamera we-RIY-Pros oblique aguqulwa asuke ekwakhiweni kwendabuko “esizungezile” aye “ekuhleleni okuhambisanayo”, futhi isilinganiso sesinqumo esiseduze nesinqumo sephuzu elikude lezithombe ezithathwe amalensi e-oblique nalo lizokhula.
Ukuze kuqinisekiswe ukuthi isilinganiso asidluli inani elibalulekile, ubude be-Pros oblique oblique bukhuphuka ngo-5% ~ 8% kunangaphambili.
Isisindo awu 710g
ubude bokugxila 28mm/43mm
umthamo wenkumbulo 640G
Olandelayo:I-D2+ DG3PROS| Iphrojekthi Edidiyelwe Yezindlu Ezihlangene Yamayunithi Amaningi